Indlela yokuthola i-hairstyle yamagagasi e-mermaid ephelele – SL Raw Virgin Hair LLC.
Indlela yokuthola i-hairstyle yamagagasi e-mermaid ephelele
Amagagasi e-Mermaid abukeka kahle nganoma yisiphi isikhathi sosuku. Funda ukuthi ungawathola kanjani amagagasi e-mermaid ukuze anyakaze imini nobusuku.
Dec 07, 2021 | LeAna Mcknight
Kusebusika futhi yisiphi isitayela sezinwele esingcono kunamagagasi e-mermaid?
Zilungele cishe noma yisiphi isenzakalo. Udinga ukubukeka nje kwephathi yeholide noma isidlo sakusihlwa somndeni? Amagagasi olwandle yonke indlela. Uya ku-brunch noma umshado? Lesi sitayela sezinwele sihambisana kahle cishe nanoma iyiphi ingubo.
Njengoba kuyisitayela sezinwele esihle kakhulu sasebusika, sicabanga ukuthi kungcono kakhulu ukuthi sikunikeze isifundo sezinwele ze-mermaid waves.
Ayini amagagasi e-mermaid?
Aziwa nangokuthi amagagasi olwandle asuselwe kugqozi lwesitayela, amagagasi e-mermaid angamagagasi axegayo anokunyakaza okuningi. Kodwa-ke, ngokungafani namagagasi olwandle anokubukeka okungahlehlisiwe futhi abonakala emahle kakhulu, amagagasi e-mermaid aqoshwe kancane futhi anomnyakazo womumo ka-S. Zinokunyakaza okuningi futhi zinhle ngokunganaki kunezinye izitayela zezinwele zohlobo lwamagagasi.
Njengoba siphawulile, ukubukeka okuguquguqukayo okungagqokiswa phezulu noma phansi ngokusekelwe lapho uya khona. Isitayela sibukeka singcono ezinweleni ezibude obumaphakathi nezinde (okungenani ubude bamahlombe) ngakho-ke sisebenza kahle kakhulu uma sibhangqwe nezandiso zezinwele zemvelo zekhwalithi.
Ngakho-ke, uwathola kanjani amagagasi e-mermaid aphelele?
Hhayi-ke, nanka amathiphu ambalwa okuzuza amagagasi achaziwe ngomuzwa ovamile.
1. Qala ngezinwele ezihlanzekile
Isinyathelo sokuqala ukulungisa izinwele zakho, futhi lokho kusho ukuqala ngezinwele ezihlanzekile ezigeziwe futhi zomiswa. Ukuvuthwa kungaba kuhle kakhulu ukuvimbela i-frizz nama-curls akho emvelo ukuthi angathinti amagagasi ofuna ukuwadala.
2. Thola insimbi yakho eyisicaba noma insimbi egoqa
Yebo, zombili zingasetshenziswa ukufeza ukubukeka kwegagasi. Uzofuna ukusebenzisa insimbi enkudlwana kuma-looser curls. Faka isifutho osithandayo sokuvikela ukushisa bese uqalisa ngezigaba.
Iqhinga lokuqaphela umlungisi wezinwele ukusonta izigaba ngenkathi uzigoqa ensimbini egoqayo. Uma lokho sekwenziwe, kufanele udonse iziphetho ukuze uyidonsele phansi lapho ukhipha insimbi yokugoqa. Lokhu kukunikeza i-loser curl efana kakhulu namagagasi e-mermaid.
Ungafuna ukufana noma udale ukuhluka kumagagasi.
Ukuze uthole umthamo omncane, ungase usebenzise izandiso zezinwele zemvelo njenge-SL Raw Natural Wavy Hair bundle. Lokhu akugcini nje ngokungeza ivolumu kodwa kubamba ama-curls kahle futhi kunokunyakaza kwemvelo okuyisici esisayinwe sokubukeka kwamagagasi e-mermaid.
3 Qeda ngesifutho sokubamba
Akukho lutho oluqine kakhulu ngoba ufuna ukunyakaza okuxekethile nokungokwemvelo kwamagagasi olwandle. Kodwa ungasebenzisa isifutho sezinwele esiguquguqukayo ukuze wengeze i-sheen kancane ngenkathi uqinisekisa ukuthi ama-curls akho azohlala usuku. Ikhiya ekubukekeni ngenkathi isashiya lowo muzwa ohehayo, oxegayo.
Ithiphu Yebhonasi: Sebenzisa Izandiso Zezinwele Zemvelo
Izandiso zezinwele zemvelo eza sezivele zigoqekile zenza kube lula ukufeza ukubukeka kwegagasi le-mermaid. Ukufaka okulula ezinweleni zakho nasesitayeleni njengoba kudingeka.
Ngokwesibonelo, SL Raw Natural Wavy Hair, ukugoba kwayo nokuthungwa okugcwele kuyenza ifanelekele i-curl exegayo ngokubukeka okupholisheke kakhudlwana. lokho kujwayelekile ngamagagasi e-mermaid.
10"12"14" - $224.00 12"/14"/16" - $256.00 14"/16"/18" - $286.00 16"/18"/20" - $320.00 18"/20"/22" - $355.00 20"/22"/24" - $396.00 22"/24"/26" - $454.00 24"/26"/28" - $518.00 26"/28"/30" - $592.00 28"/30"/32" - $658.00
Beauty bloggerbeauty tips and tricksbeauty trendshair guideHair talkhair trendshairstyle ideashairstylinghairstyling tipsmermaid waveswinter hairstyles